ပန်ဒိုရာ: ဆက်ဆံရေးတွေ ကျဲနေတယ်
Posted by pandora at 2:00 AM
ဆက်ဆံရေးတွေ ကျဲနေတယ်နော် ဟွန်း ... ဟွန်း။ ၁နာရီ ထပြီး ကြိုးစားပမ်းစား ရေးတယ်ဆိုတော့ နည်းနည်း သနားသွားတယ် မပန်ရေ။
သတိရနေပါတယ်။ မနျောက်ယှက်ချင်လို့ အသာလေးဘဲနေပါတယ။် အဆင်ပြေသလိုပေါ့။
:) ဘာပဲပြောပြော အားပေးနေပါတယ်ဗျာ ကောင်းသောနေ့ပါ :)
သြော်.. ဂလိုဖြစ်နေတာကိုး။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ..
နေသားတကျနဲ့ အချိန်တွေ ပိုထွက်လာပါစေ:)
ပန်ပန် ပျောက်နေတာကြာလို့ ဘလော့ကို ခဏခဏ လာကြည့်တယ်။
ဂျီတော့ခ်မှာ မနက်က ခဏတဖြုတ်တွေ့ရပေမဲ့ ဘီးဇီးဆိုင်း ပြထားတာနဲ့ မခေါ်ဖြစ်တာ။
အဆင်ပြေပါစေ ပန်ပန်ရေ ...
ကိုယ်ချင်းစာတယ် ညီမရေ။ ခုတောင် google reader ကနေ အသစ်လေး မြင်လို့ အပြေးလာဖတ်ရင်း ဘ၀တူချင်း ၀င်ညည်းသွားတာပါ။ လုံးဝ မပြတ်နိုင်ကြပေမယ့် prioritise တော့ လုပ်ရမှာပဲ။ အဆင်ပြေပါစေ။
တရေးနိုးရေးတဲ့စာကို အစောကြီး လာဖတ်ပါတယ်..
စာတွေပြန်ရေးမယ့်အချိန်ကို စောင့်နေပါတယ် အစ်မပန်.
အမကတော့ ဘာတွေလုပ်နေမှန်းချပြစရာ မရှိဘဲ အချိန်တွေ ကုန်နေတာ ပန်ပန်ရေ (ခုလေးတင် ပန်းနွယ်ဆီလည်း ဒီအတိုင်းရေးခဲ့တယ်...ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့ သူကို ၀ိုင်းမဆူကြကြေးနော်)
မပန်ရေ.. ဆက်ဆံရေး မကျဲပါနဲ့.. ;)
အမတို့လည်း အတူတူပါပဲ.. အလုပ်ကတဖက် စိတ်ရှုတ်တာတွေက တဖက်ဆိုတော့ အလိုလိုနေရင်း Blog ရေးဖို့ကို စိတ်မပါတော့ဘူးပေါ့.. :)
အကြည်ဓာတ်လေးတဲ့ခါ၊ အချိန်လည်းရရင် ရေးပါဦး။
ပြန်ပြီး အင်ထရိုတဲ့ စာလေးဖတ်သွားတယ် မပန်..
အင်ထရိုတဲ့ စာလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်အသစ်မြင်လိုက်ရလို့ ကျေနပ်သွားပါတယ်..
အဖြစ်တွေက တူနေပါတယ် အမရေ.. :D...
တထပ်တည်း ဆိုသလိုပါပဲ။ ပျော်ရွှင်အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
အင်း။ ဒါကြောင့် ပျောက်နေပါတယ်လို့။ အားရင် ရေးပေါ့ မပန်ရေ။ မအားတော့လည်း ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ။
ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုပါပဲလေ... တူတူပဲပေါ့...
တရေးနိုးတဲ့အကြံ စာရေးရန် ဖြစ်သွားတော့ ကောင်းတာပေါ့။
ကြိုးစားပြီးရေး စကားလေးဘာလေးပြောချင်ရင် ညစာကျွေး နားထောင်ပေးမယ်... :P
ပန်ပန်က လေစိမ်းတွေ တိုက်သော်ငြားလည်း စာလေးနဲ့ လေပြေသွေးလေတော့ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ကျေအေးလိုက်ကြောင်းပါ။
မအားတာမှ မပြောပါနဲ့တော့..မအားတဲ့အကြောင်းတောင် မဟနိုင်တော့လို့ လက်ပဲ ခါပြလိုက်ရတယ် :D
သူ့အကြောင်းကလဲ ပါသေးသကိုး။ စာလေးနဲ့ အင်ထရို ၀င်ပါအုံးလေ..
အဲဒါ- ဘလော့အီခြင်း တမျိုးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
ဘလော့လုပ်ကာစ အရင် ကာလတွေကလည်း..အခု ပြောတဲ့..အချိန်ဇယားတွေ နဲ့ မခြားနား မကွဲပြားလှစွာ လည်ပတ်နေမှာပါပဲ။ ခုမှ ရှုပ်ချင်ဟန် မဆောင်ပါနဲ့နော်။
ဒါမှမဟုတ်..ဘလော့အကြည်ဓါတ်ခမ်းခြင်း လား ( ထူးအိမ်သင်စကားယူငှါး)
ပြန်ရေးတော့မယ် ဆိုလို့ ၀မ်းသာရတယ်
ဘာရေးရေး ဖတ်မဲ့သူတွေ ရှိနေတယ်.
လေစိမ်းတွေတိုက်နေတယ် အရင်လေ ဒေါ်လေးအပြုံးတွေ မချိုတော့ဘူးဗျာ
ဘာမှာဟုတ်ဘူးစတာ အန်တီမေဆွိသီချင်းသတိရသွားလို့း)
ထင်သားပဲ… ပန်ဒိုရီအနားမှာ ရှိနေလို့ ပဲ ဖြစ်ရမယ်လို့ … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တို့ က ဒုတိယနေရာကိုပဲ ကျေနပ်နေမှာပါပန်ရယ် (ချွဲကြည့်တာ)… ပန်ဒိုရီဆီ တို့ အမျိုးသားကို သင်တန်းတက်ခိုင်းလိုက်မယ်… ဂရုစိုက်နည်းလေးတွေ…
တစ်ရေးနိုးအကြံလေးနဲ့ လေပြေသွေးတာပေါ့ ဟုတ်တယ်ဟုတ်.......း)
ကိုယ်ပြောမယ့်စကား ကိုအောင်သာငယ်က အရင်ဦးသွားပြီ... သို့သော်လည်း ပြောမှာပဲ...
(အခုတလောမှာ ကူးယူဖေါ်ပြတာတွေက ခေတ်စားနေတယ်မဟုတ်လား...) :-P
ဆက်ဆံရေး ကျဲတဲ့ အထဲ..အကိုတို့ လဲပါတယ်...အလုပ်များနေလို့ သိပ်မရောက်ဖြစ်တာလဲပါတယ်..
ပန်ဒို့ အချိန်ဇယားဖတ်ရတာ မောလိုက်တာ..ဒါပေမယ့်
သိပ်တော့ အပင်ပန်းမခံပါနဲ့ ...။
ဘေးမှာ အားပေးဖော်ရှိနေတော့ အမောပြေမှာပါ...။
အရာရာကို အဆင်ပြေအောင်မြင်စွာ ကျော်လွှားနိုင်ပါစေပန်ဒိုရေ..။